isingeniso Jikelele - China Ningbo Ruking kagesi
Amaphethini Cutting umshini ohlola
Amaphethini Cutting plotte
Ukuthunga Isifanekiso Cutting Machine
Cutting Indwangu umshini ohlola Machine
Ukukhangisa & Packing Imboni Cutting Machine
Double Shona Auto Cutting System
Ukukhangisa digital ahlabayo umshini ohlola
Izingubo ahlabayo umshini ohlola
Auto-ingaphakathi ahlabayo umshini ohlola
Ifenisha umsiki digital
Isikhumba isikhwama umsiki digital
Okufakiwe ahlabayo umshini ohlola
Ningbo Ruk Technology Co., Ltd. kuyinto ibhizinisi zobuchwepheshe kokuhileleka kunoma yiluphi Industrial ezishintshayo uhlelo, imishini kanye izingxenye ezisele ezihlobene, kanye iqoqo layo ngokugcwele R zohlelo & D, ukukhiqiza, yokuthengisa isevisi yethu iyonke.
Thina umnikazi iqembu lochwepheshe lalinabashumayeli abantu abanamakhono ubuqotho, abaphethe okuthunyelwe okubalulekile ku abafanele Dept, imishini, electronics, computer nokuphatha. Siphinde sibe nokubambisana R & D zohlelo nge kahle azi inyuvesi ezifuywayo kwezilwandle, ikakhulukazi beletha ubuchwepheshe yaseYurophu kanye nochwepheshe. Thina ngokuzimela lubonisa ithuthukiswe CAD / CAM ihlanganiswe NC ahlabayo uhlelo, kanye isilawuli ukushayela yafuna e ezishintshayo ensimini. Imikhiqizo kabanzi isicelo ezimbonini eziningi ezifana isikhumba, izicathulo, isembatho, isikhwama, emabhokisini plastic material nezimo, kwakwakhe impahla, umshini amathuluzi electron. Thina ngokugcwele nokuqalisa ISO9001 ukuphathwa izinga uhlelo, futhi baye bayinqoba isitifiketi segunya ezifuywayo kwezilwandle.
Ruk ubuchwepheshe ukugcina ingqondo okwangempela nemibono emisha njengoba umoya ibhizinisi, ngenhliziyo yonke njengoba inkonzo nje ebamba isisu. Siqiniseka ngokugcwele ukuthi iwine udumo lwakho nokwethembela nge izinga ezinhle, inkonzo ngobuqotho futhi wenze Inani ikhasimende ngaphansi imizamo yethu wenkuthalo.
isikhathi Iposi: Mar-06-2018
Ifeksi: + 86-574-28812912
Ruk ubuchwepheshe ukugcina ingqondo okwangempela futhi INNO ...